Zim needs debt relief­ — IMF paper - NewsDay Zimbabwe
Home News Zim needs debt relief­ — IMF paper
Zim needs debt relief­ — IMF paper
WASHINGTON – Zimbabwe’s heavy debt burden can only be tackled through international debt forgiveness, according to the International Monetary Fund (IMF).
IMF staff estimated that Zimbabwe’s foreign debt is projected to reach 151% of gross domestic product (GDP) by 2015, with 104% of GDP in arrears.
But to win debt relief Zimbabwe would need to improve ties with the international community and qualify for a global scheme for heavily indebted poor countries that would lead to debt cancellation after a two-year economic programme.
The IMF has slowly reengaged with Zimbabwe to try and help fix the economy but refuses to lend money to the country until the government shows it is willing to implement policies that stabilise the economy.
IMF staff said they had advised Zimbabwe not to use the SDR-related funds but the government had converted an equivalent of $150 million of the $410 million that went to Zimbabwe for budget financing. – Reuters
Previous articleEskom threatens to switch off miners
Next articleMultilateral lender lifts world growth forecast